Horumarka weyn ee Android Wear nolosha batariga | Androidsis
Horumarka weyn ee loo yaqaan 'Android Wear Lollipop' ayaa shaki ku jirin in uu batteriga ku habboon yahay
Francisco Ruiz | | Smartwatch, Tababarada
Way yartahay taas Nalalka Android Xidho o Android Wear 5.0.1 Waxay u timid dhammaan saacadaha caqliga leh ee adeegsanaya noocaan ah Android si gaar ah loogu talagalay qalabkan Wareables. Noocyada qaarkood oo, halkan ku yaal Androidsis, waxaan horeyba kuugu tusay dhammaan warkooda laba fiidiyow. Mid ka mid ah Moto 360 iyo mid kale oo ku jira LG G Watch oo ahayd kii ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Android Wear' oo la kaydin karo si uu u helo cusboonaysiinta 'Android Wear Lollipop'.
Fiidiyowga maanta, oo ku lifaaqan madaxa maqaalkan, waxaan ku tusayaa xog gacanta ku jirta, maaddaama horumarka ugu weyn ee aan ka heli karno Android Wear Lollipop si toos ah looga heli karo nolosha batteriga ee saacadaha casriga ah ee Android. Horumar la taaban karo ee nolosha batteriga, in ugu yaraan boosteejooyinka aan awoodno inaan shaqsiyan u tijaabiyo, waxay kordheysaa ilaa 100% ismaamul.
Xaaladdan gaarka ah, mid ka mid ah cilladaha aan ka heli karnay Moto 360 shaki la'aan nolosha batteriga liita ee qalabka. Batariga dadaal badan la galayaa korkiisa haynta 16/18 saacadood oo la isticmaalo, marwalba u isticmaal saacada qaab dhexdhexaad ah oo aanad ku badin isticmaalka qalabka garaaca wadnaha.
36 Saacadaha is-maamul ee Moto 360 oo wata Lollipop-ka Android Wear. Lagama fikiri karo Android 4.4W2
Sida ugu wanaagsan ee aad ku arki karto fiidiyowga ku lifaaqan ama shaashadda aan ku lifaaqayo xogta isticmaalka Moto 360 batari, tan hadda waa loo hagaajiyay si ka cajaa'ib badan tan iyo hadda Moto 360 oo leh qaabkan cusub ee Android Wear 5.0.1 Lollipop, waxay hagaajisay nolosha batteriga saacadda ilaa 100%.
Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in tani shaki la'aan tahay horumar weyn oo ku saabsan Android Wear, si aad u badan si aan u tixgelin karno, sida aan ugu dhawaaqo cinwaanka boostadan, sida horumarka weyn ee Android Wear.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Horumarka weyn ee loo yaqaan 'Android Wear Lollipop' ayaa shaki ku jirin in uu batteriga ku habboon yahay
Waxaan leeyahay nexus 5 oo batteriga ayaa sii yaraanaya.
Waxa ugu xun ayaa ah inaan iibsaday daafaca casiirka iyo cusbooneysiinta cusub ayaa ka dhigaysa mid aan waxtar lahayn.
Ma jiraa qof kugula talin kara barnaamij hoos u dhigaya isku xirka xogta markaan shaashadda xiro?
Taasi waa hoos udhaca Lollipop inta badan taleefannada casriga ah ee Android iyo kiniiniyada lagu cusboonaysiiyay nuqulkan cusub ee Android ah, waxaan rajeynayaa, inay dhaqso u xallin doonaan. In kasta oo waxa halkan lagaga hadlayo ay tahay kororka ama ku habboonaanta batteriga ee ku jira Android Wear smart watches.
Salaan saaxiib iyo ciidaha farxadda leh.
Waraaqaha ugu wanaagsan ee Kirismaska ​​ee la jaan qaadaya Android-keena taariikhdan
Nokia C1: Nokia waa taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee Android ka dib markii Microsoft ay heshay.